Ndị gọvanọ sị ọwụwa anyanwụ amachiela iji ụkwụ achịbata ehi - Isimbido
Ndị gọvanọ si ọwụwa anyanwụ ala anyị (ala Igbo) amachiela ndị na-achị ehi iji ụkwụ ma site n’ime ọhịa achịbata ehi n’ala Igbo.
Ndị gọvanọ a kwuru nke a n’ozi ha zịpụrụ bụkwa nke onyeisi South-East Governor’s Forum bụ Ọkammụta Simon Ortuanya bịanyere aka na ya.
Ha kwuru na site ugbu a gawa n’ihu, ịchịbata ehi n’ala Igbo ga-abụ site n’iji ụgbọala bubata ha n’ahịa ebe ndị a ga-ere ha. Ha kwuru na isite n’ime ọhịa achịbata ehi bụ ya na-ebute ọgụ na mgba dị n’etiti ndị mmadụ na ndị na-achị ehi.
Ndị gọvanọ ndị a gakwara n’ihu kwuo na ha agaghị enye ala ha maka ihe ọ bụla gbasara RUGA. RUGA bụ ụkpụrụ ọchịchị etiti na-atụ inye ndị na-achị ehi ala ebe ha ga-anọ na-achị ehi na steeti niile dị n’ala anyị.
The governors restated their position that they have not and do not intend to donate lands for the creation of Ruga settlements.
Tags: Abia stateAnambra Stateebonyi stateenugu statefarmersFGherdsmenhot newsIGBO NEWSimo stateisimbido newsRUGAsouth eastState governmentvillagers
Naịjirịa na Algeria
Onyeisiala abịanyela aka n’akwụkwọ maka ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ